Madaxweynaha Galmudug oo Jabuuti kula kulmay Wasiirro iyo taliyeyaal ciidan | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Galmudug oo Jabuuti kula kulmay Wasiirro iyo taliyeyaal ciidan
Jabuuti (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) iyo wafdigiisa maalmahan ku sugnaa dalka Jabuuti ayaa kulan la qaatay Wasiirada Wasaaradaha Amniga, Arrimaha gudaha iyo Taliyaasha Ciidamada Dalka Jabuuti.
Kulanka ayaa waxaa diirada lagu saaray amniga iyo sidii ciidamada hiil-walaal iyo kuwa Galmudug iskaga kaashan lahaayeen howlgalada lagaga hortagayo Ururka Al-Shabaab, iyo in ay dowlada Jabuuti sii xoojiso taageerada ay siiso Galmudug.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa waxaa Kulankaasi ku wehliyay Wasiirrada Amniga iyo Arimaha gudaha waxaana ay sheegeen in wada shaqeyn wanaagsan ay dhexmari doonto Jabuuti iyo Galmudug.
Sidoo kale, Madaxweynaha Galmudug, ayaa kulan la qaatay Guddoomiyaha Dekeddaha dalka Jabuuti oo uu kala hadlay dhismaha dekedda weyn ee Magaalada Hobyo ee gobolka Mudug.
Taliyeyaal ciidan Jabuuti